UGenesise KaiBiLi COVID-19 test antigen uthole iMHRA ngempumelelo ngoMeyi, 2021
I-MHRA, i-Medicines and Healthcare products Regulatory Agency ilawula imithi, amadivayisi wezokwelapha nezakhi zegazi zokumpontshelwa e-UK. UMnyango Wezempilo kanye Nokunakekelwa Komphakathi (i-DHSC) ukhiphe iphepha lomgomo mayelana nokukhushulwa kwezinhlelo zokuhlola i-coronavirus (COVID-19). I-MHRA ...
UGenesis KaiBiLi COVID-19 test antigen uthola izimvume eBelgium
IGenesis KaiBiLi COVID-19 antigen test ithola izimvume eBelgium ISARS-CoV-2 Ukubuka konke Ama-coronaviruses enoveli angaphansi kohlobo lwe- β genus. I-SARS-CoV-2 yisifo esithathelwanayo sokuphefumula. Abantu bavame ukuthambekela. Njengamanje, iziguli ezitheleleke nge-novel coronavirus yizona ezimuncu kakhulu ...
IGenesis KaiBiLi COVID-19 test antigen ithola izimvume ku-BfArM
Maphakathi no-2021, i-COVID-19 yaqhubeka ikhona. Kwamanye amazwe aseYurophu, bekukhona i-COVID-19 ehlukile. Ngokusho kwempendulo evela kochwepheshe, i-mutant COVID-19 ibe nokuguqulwa okuqinile. Ngaphezu kokukhuthaza ukugoma ngenkuthalo, amazwe aseYurophu nawo akhuthaze ngenkuthalo futhi ...